Ny laharam-pahamehana isa 1 ho an'ny CMO amin'ny 2012 | Martech Zone
Ny laharam-pahamehana isa 1 ho an'ny CMO amin'ny 2012
Talata, Febroary 28, 2012 Talata, Febroary 28, 2012 Douglas Karr
Raha manararaotra misintona ny Fandinihana Chief Chief Officer Officer an'ny IBM amin'ny 2012, mendrika tokoa ny vakiana! Ary azonao atao ny mandray ilay Fanadihadiana CMO koa!
Avy amin'ny Fianarana IBM Global CMO ho an'ny 2012
Taorian'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny CMO 1,734, nahitana indostria 19 sy firenena 64, fantatray fa mihetsiketsika ny CMO, saingy nandre fientanam-po be momba ny ho avin'ny marketing koa izahay. Ireo resadresaka ireo sy ny fanadihadianay lalina ny voka-pikarohana dia manasongadina ny filàna mamaly ireo zava-misy vaovao telo:
The mpanjifa nahazo hery mifehy ny fifandraisan'ny orinasa ankehitriny
nanolotra sandan'ny mpanjifa no zava-dehibe indrindra - ary ny fihetsiky ny fikambanana dia manan-danja toy ny vokatra sy serivisy omeny
Ny fanerena amin'ny tompon'andraikitra ho an'ny orinasa dia tsy soritr'aretina amin'ny fotoan-tsarotra fotsiny, fa fiovana maharitra izay mitaky fomba, fitaovana ary fahaiza-manao vaovao.
Miaraka amin'ny fisian'ny finday sy sosialy dia hieritreritra ianao fa izy ireo no handray ny laharana voalohany amin'ny maha laharam-pahamehana ho an'ny CMO eran'izao tontolo izao… saingy diso ianao.
Tamin'ny herinandro lasa teo aho dia nitafa tamin'i Troy Burk, mpanorina ny orinasa automatisation marketing, ary nanontaniako azy ny momba ny toerana misy azy ireo eo amin'ny sehatry ny indostria. Ny valinteniny dia nifanaraka tamin'ny fandalinana CMO:
Ny fifandraisana dia tonga alohan'ny vola miditra amin'ny rakibolana sy amin'ny orinasa. Araraoty ny fifandraisana ary hahazo ny vola miditra ianao. Marketing amin'ny fiainana andavanandron'ny mpanjifa dia fomba hafa hijerena ny orinasanao - manerana ny dingana rehetra amin'ny mpanjifa. Ny marketing dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiantohana ireo programa sy fampielezankevitra mety (varotra, varotra ary fahombiazan'ny mpanjifa) dia miara-miasa mba hisarihana ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny mpanjifa tsara indrindra hampandroso azy ireo eo amin'ny fifandraisana, na iza na iza dingana ifantohany.
Customer Automecycle Marketing Automation amin'ny alàlan'ny Right On Interactive no hany vahaolana manome ny fahitan'ny fikambanana ny toerana misy ny mpanjifany sy ny vinavinany rehetra (na ny dia ataon'ny mpanjifa). Manomboka amin'ny ahiahiana ka hatrany amin'ny mpanjifa tsy mivadika. Mahita azy rehetra ianao ary mampiasa automatique handroahana fifamatorana bebe kokoa.
Mahafinaritra ny miara-miasa amin'ny mpanohana sy mpanjifa izay eo an-tampon'ny fironana!
Tags: marketing amin'ny fiainana andavanandron'ny mpanjifampanjifa tsy mivadikamahitsy amin'ny interactiveROI
Herintaona - fitomboan'ny finday 700%
Manampia bokotra manaraka orinasa LinkedIn
28 Mey 2012 tamin'ny 12:34 hariva
Nanatrika ny IBM CMO Study Webinar aho izay ekeko fa fampiasana fotoana be dia be, hita eo ny bilaoginao ary tiako ny fomba nampidiranao ny tafatafa farany nataonao.